Ngenisa uququzelelo ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-QGIS kunye nokudala iiPolgoni- Geofumed
Ngenisa uququzelelo ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-QGIS kunye nokwenza iiPolgoni
NgoFebruwari, 2016 Geospatial - GIS, qgis
Enye yeendlela eziqhelekileyo ekusebenziseni iiNkqubo zeNgcaciso zeJografi kukwakhiwa kwamacandelo endawo avela kulwazi olusuka ebaleni. Nokuba oku kumele ulungelelwaniso, iipasile zephepha, okanye igridi yokuphakama, ulwazi luhlala luza kwiifayile ezahlulwe ngokhefana okanye ispredishithi se-Excel.
1. Indawo idibanisa ifayile kwi-Excel.
Kule meko, ndizama ukungenisa indawo yokuhlala yaseRiphabhulikhi yaseCuba, endikhuphelayo I-diva-GIS, leyo ngendlela yenye yezona ndawo zikhuselekileyo ukukhuphela idatha yejografi kulo naliphi na ilizwe. Njengoko ubona, iikholamu B kunye no-C ziqulathe ulwazi malunga nobude kunye nobude obuyi-form zendawo.
2. Ngenisa ifayile kwiQGIS
Ukungenisa izilungelelaniso zefayile ye-Excel, kwenziwa:
Vector> XY izixhobo> Ifayile ye-OpenExcele njengetafile yempawu okanye uluhlu lwenqaku
Ukuba ifayile igcinwe ngolwandiso lwe .xlsx, isikhangeli asizukuyibonisa, njengoko icoca iifayile kuphela ngolwandiso lwe .xls. Ayongxaki, sinokusebenzisa iindlela ezindala ze-DOS kwaye sibhale kutshintsho lwegama, icebo lokucoca ulwelo: *. * (asterisk dot asterisk) kwaye siyangena; oku kuyakuvumela zonke iifayile ezikuloo ndawo ukuba zibonwe. Ngesivele sabhala * .xls kwaye yayihluza kuphela iifayile ngolwandiso lwe .xls.
Emva koko kuvela ipaneli apho kufuneka sibonise ukuba yeyiphi iikholomu elingana no-X ulungelelaniso, kulo mzekelo sikhetha ikholomu yokukhawulela, ikholomu yesalathisi ye-Y yokulungelelanisa.
Kwaye sinayo. Umbuzo ubonakalisa ukuba umaleko ugcinwe ngedatha equlethwe kwifayile yokuhlala kwabantu baseCuba, ebandakanya igama, ububanzi, ubude, ukuhlelwa, kunye nephondo lolawulo.
3. Yenza iipoligoni ngoqhagamshelwano
Xa kunjalo, asifuni ukungenisa kuphela iindlwana kodwa nokudala i-polygon ngomyalelo walezo zidibeneyo, sinokusebenzisa iplagin Amanqaku2One. Le iplagi ikuvumela ukuba uchonge indlela eya kubizwa ngayo indawo ekufikelelwe kuyo, ukuba into esiza kuyingenisa iyakwakhiwa njengemigca okanye njengepoligoni.
4. Ungangenisa njani ulungelelwaniso ukusuka kwi-Excel ukuya kwezinye iinkqubo zeCAD / GIS.
Njengoko unokukhumbula, siyenzile le nkqubo kunye nezinye iinkqubo ezininzi. Ilula njengeQGIS, bambalwa. Kodwa nantsi indlela yokwenza ngayo AutoCAD, Microstation, GIS asibonise, AutoCAD Civil 3D, Umhlaba ka-Google.
Post edlulileyo«Ngaphambilini INkosi yoYilo noCwangciso lweeDolophu [UJCV]
Post Next ISetyhula 1: Inkomfa I-TOPCART 2016Okulandelayo »